Falal gumaad iyo dilal dib uga bilowday Koonfurta Afrika – Balcad.com Teyteyleey
Falal gumaad iyo dilal dib uga bilowday Koonfurta Afrika
By Abdihakin Yousuf	 On Aug 3, 2017
Falkaan lagu gubay Goobaha ganacsiga oo ay ku dhinteen Alle u naxariiste Cali Maxamuud Cali, Cabdullaahi Cali Ceymooy ayaa waxaa uu dhacay habeenkii Isniinta oo taariikh-da ku beegneyd 31-ka bishii ina dhaaftay ee July, waxaana loo adeegsaday dhalooyin lagu shubo basiinka ee loo yaqaano “Padrol bamb”
“sida laga helay muuqaalka camero ku xerneyd goobta booliskuna uu inoo sheegay waxaa weerarkaan loo adeegsaday dhalooyin nafto ama baziin lagu soo shubay kadibna taraq lagu daaray oo goobta ganacsiga la dhax galiyay, lama oga cidda ka dambeysay lakiin weli waxaa socda baritaano ay ciidamada booliska wadaan” ayuu yiri Guddoomiyaha Jaaliyadda Somaaliyeed ee dalka South Africa Dr Maxamed C/laahi
Labada marxuum iyo labo kale oo falkaasi ka badbaaday ayaa jiifay guri ku dhagan goobtooda ganacsiga, waxaana marka ay kusoo kaceen dabkaasi ay isku dayeen in ay badbaadiyaan dukaanka balse ay suura gali waysay sida uu warbaahinta Qaranka u sheegay Suudi Cali Axmed oo adeer u ahaa midka mid ah muwaadiniinta geeriyootay.
“Wiilkaan ayaa gudaha soo galay si uu u damiyo dabka marka uu gudaha soo galay saddex mar ayuu dhahay, i badbaadiya marka wiilkaan kale ayaa kasoo dabagalay kadiba labadooda meeshaas ayaa nafta uga baxday”
Alle ha u naxariiste Cali Maxamuud Cali waxaa uu ka mid ahaa ganacsatada Soomaalida ee ugu waa weyn gobolka Limpopo, isla markaana ku leh gobolkaasi hanti ma guurto ah, marka laga soo tego waxaa jira qasaare xooggan oo gaaray goobta ganacsiga oo dhamaanba burburtay.
“Dukaanka waxaa uu ahaa mid dhowr nooc isugu jira qeybo kala duwan u kala shaqeeya ninka ku dhintay meeshaan Cali Maxamuud waxaa uu ahaa ninka iska leh hantidaas oo dhan xitaa dhismaha iyo dhulka intaba” ayuu Warbaahinta u sheegay Cabdulaahi Wehliye oo ka mid ah ehalada marxuumka.
Soomaali kala duwan ayaa isaga kala yimid guud ahaan gobolada dalka Koofur Africa, kuwaa oo ka tiiraayeysanaa falkaan arxan darada ah ee naxdinta leh oo lagu gubay muwaadiniintaan Soomaaliyeed, waxaana aas wadareed loogu sameeyay magaalada uu falka ka dhacay.
Qaar ka mid ah waxgaradka iyo odoyaaasha dhaqanka oo goobta kula hadlay Warbaahinta waxa ay tacsi u direen ehalada marxuumiinta geeriyooday, iyaga oo ka codsaday dowladda Soomaaliya in il gaar ah ay usoo yeelato Soomaalida ku nool koofur Africa ee sida xaqdarada ah loogu gumaadayo.
Madaxda Jaaliyada iyo waxgaradka Soomaalida ee aaska ka qeybgalay ayaa si wadajir ah bulshada ugu wada baaqay in meel looga soo wada jeesto falalka noocaani ah, isla markaana laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa dadkii dambeeyay falkaan arxan darada ah.
The post Falal gumaad iyo dilal dib uga bilowday Koonfurta Afrika appeared first on Ilwareed Online.
Mareykanka: “Iran Waxay Waddaa Daandaansi”
Maamulka Soomaaliland oo gabi ahaan joojiyay howlihii iyo dhisitaankii kaniisada Hargeysa